Amisom Ciidamo Dheerad ah ayaan u baahan nahay si aan ula dagaalano Al-shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Amisom Ciidamo Dheerad ah ayaan u baahan nahay si aan ula dagaalano...
Amisom Ciidamo Dheerad ah ayaan u baahan nahay si aan ula dagaalano Al-shabaab
Ergeyga Gaarka ee Ururka Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ahna Madaxa howlgalka AMISOM, Francisco Madeira ayaa ka hadlay Howlgalka Ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya.
Waxa uu sheegay Francisco muhiim in ay tahay in ay helaan Ciidamo dheeraad ah oo lagu soo daro Howlgalka AMISOM, si loo soo xoojiyo taageerada la siinayo Dowladda cusub ee Soomaaliya.
Danjire Francisco Madeira ayaa sheegay Howlgalka Ciidanka AMISOM in hada uu marayo meel wanaagsan, balse weli ay tabayaan Ciidamo cusub, maadaama Howlgalka nabadeynta Soomaaliya uu qaatay waqti badan.
“Waxaan u baahan nahay Ciidamo dheeraad ah, oo lagu xoojinayo Dowladda cusub, Howlgalka AMISOM sida hada uu ku socdo waa si wanaagsan, AMISOM waxa ay ku dadaaleysaa sidii ay Soomaaliya u nabadeyn laheyd” Ayuu yiri Mr. Madeira.
Sidoo kale Ergeyga Gaarka ee Ururka Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ahna Madaxa howlgalka AMISOM, Francisco Madeira ayaa afka ku balaariyay in ujeedka AMISOM aan marnaba la hiigsan doonin hadii aan la helin baaqa ay jeedinayaan ee ah in ay helaan Ciidamo dheeraad ah.
Ugu dambeyntii Danjire Francisco Madeira ayaa sheegay in ay xoojinayaan Dagaalka ay kula jiraan ururka Al-shabaab, oo ku sugan qeybo badan oo ka mid ah Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, kuwaasi oo mararka qaar weeraro ka fuliya xarumaha Ciidanka Dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM.